कैलाशको कुटी: 2009
एकाबिहानै निद्रामै मैले भने 'हेलो'।
'गुड मर्निङ फूफू। तपाई मेरो बर्थ डेमा आउनु है जसरी पनि' एकदमै टठिलो र तिखो स्वर कानमा पर्यो।
'पुसको इलाभेन गते हो नि मेरो बर्थ डे। तपाईले बिर्सिनु भयो कि क्या हो? त्यो दिन भोली हो, स्याटर्डे। पक्का आउनु है। तपाईलाई बाई अरुलाई पनि बोलाउँछु म।'
भदाको फोनले मलाई ब्युझाएन मात्रै। सोचमग्न पार्यो। घडी हेर्दा साढे पाँच बजेको थियो। आजकाल त त्यत्तिबेला सम्म राती नै हुन्छ। त्यहीमाथि जाडोको याम छ। काम नभएसम्म न्यायो सिरक छाडेर उठ्ने जाँगरै चल्दैन। यो केटाले चाहिँ सबैलाई जगाउँन अनि निम्तो दिन भ्याइसकेछ। अचम्म!
ऊ भोलीदेखि ४ वर्ष नाघेर पाँच वर्षमा लाग्दैछ। उसको नाम सक्षम हो। उसैले मोबाइल फोनबाट दिएको निम्तोको कुरा गर्दैछु म। साँच्चै मैले त भदाको जन्मदिन बिर्सिएको रहेछु। यद्यपि हरेक साल उसको जन्मदिनमा हामी सामान्य रुपमा भेला भएर मनाउँदै आएका थियौँ। र ऊ जन्मेको पनि हिजै हो जस्तो लाग्छ सम्झँदाखेरी। तरपनि उ त हेर्दाहेर्दै ठूलो भइसकेछ। आजकालको माहौललाई बुझ्ने भइसकेछ। ए बा !
मेरो बाल्यकाल सम्झँदा मैले ४ या ५ सालको हुँदाखेरी के के गर्थे। कसरी सोच्थे। मलाई एकरत्ति याद छैन। त्यसभन्दा धेरै पछिसम्म पनि मलाई धेरैजसो कुराबारेमा ज्ञान थिएन। साह्रै लद्‌दु भएर होला। अहिलेका बच्चाहरुमा देखिने Understanding, smartness, cleaverness देख्दा म दंग पर्छु। अनि जमानाअनुसारको हुनैपर्यो नि भन्ने लाग्छ। किनकी उनीहरुको जमाना बढी प्रतिस्पर्धात्मक, रफ्तारको र सृजनात्मक हुन्छ अवश्य पनि हाम्रो भन्दा। त्यसबेला झनै Survival of the Fitest को माहौलमा टिक्नु जो पर्नेछ।
खासगरी यो कुरा यहाँ ठेल्नयोग्य लाग्नुमा एउटा कारण छ। पोहोर साल नै दाजुले भन्नुभएको थियो कि 'अब हाम्रो तर्फबाट यहि सालसम्म मात्रै हो। सक्षम आफैले पहल गर्न सक्ने भएपछि जे सुकै गरोस्'। दाईको आसयमा हामी सबैले सहमति जनाएका थियौँ। र सबैजनाले यो वर्ष वर्थ डे भनेर मनाइने छैन भन्ने बुझाई राखेका थियौँ। त्यसै पनि यो वर्थ डे, एनिभर्सरीलगायतका कुराहरु मान्नेप्रति मेरो जोड रहँदैन। र मानाउँनैपर्ने संस्कृति पनि हो जस्तो लागेको छैन यतिञ्जेलसम्म। तर पुस्तान्तरको क्रममा आफ्ना यथावत् रहेका सोच र व्यवहारमा पनि अन्तर ल्याउँनुपर्ने र अपडेट गर्नैपर्ने अवस्था आइपर्ने रहेछ।
दाईको आसय जे थियो त्यसलाई सक्षमले बुझेरै यो पल्ट आफ्नो बर्थ डे मनाउँन ऊ आफै पहल गर्न थालेछ। सक्षमलाई दाईको आसयको बारेमा थाहा छ/छैन। तर ऊ आफैले पहल गरेर यो पालीको उसको वर्थ डे मनाउनै पर्ने भएको छ। भाउजुसँग कुरा गर्दा अझ बढी कुरा थाहा भयो। आमा बाबा भन्दा अगाडि उठेर आफ्नो स्मरणलाई ताजा पार्नलाई अघिल्लो अघिल्लो वर्षहरुमा मनाएको वर्थ डेको फोटो हेरेछ सक्षमले। त्यसपछि यो पालीको तयारीमा जुटेछ केटो। उसले दुईटा शर्त राखेछः पहिलो आफूले जो जो नाम दिन्छ सबैलाई बोलाउँने। दोस्रो उनीहरुको नम्बर र मोबाइल उपलब्ध गराउने। अनि त भट्टाभट फोन गर्दै वर्थ डे मनाउँने तरखरमा लागेछ सक्षम।
अब सक्षमले कुरा मिलाएरै छाड्यो। अझ भनौ न आफ्नै पहलमा आफ्नो बूताले भ्याएसम्म पहल गरेर आमा बाबालाई आफ्नो वर्थ डे मनाउँनु पर्ने कुरामा सहर्ष खुशी पारे। उनको साथीभाई सबै सक्षमको वर्थ डेमा जाने भनेर फुरुङ्ग। सक्षम आफै असाध्यै खुशी भएर फुर्तिलो बनेको छ। अर्कोतिर पोहोर साल सक्षमको बाबाले निर्क्यौल गरेको धारणा पनि एक हदसम्म पूरा भएकै छ। 'That's the spirit' भनु जस्तो सक्षमको कुरा सुन्दा म केही हर्षित भए। केही सतर्क पनि। यति सानै उमेरमा आफुले भनेको र चिताएको कुरा पुर्याउँनलाई देखाएको जागरुकता र ढिपीलाई लिएर सायद खुशी नै हुनुपर्छ होला अभिभावक वर्गले। त्यसैले मलाई यो प्रसंगमा भन्न मन लाग्यो 'वाह्‌! Kid आजकाल'।
अन्तमा सक्षमलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। उनको चाहना, इच्छा पूरा होऊन्। भविष्य राम्रो होस्।
(माथिको तस्बीरमा अघिल्लो जन्मदिनको अवसरमा केक खाँदै उनै भोलीको Birthday Boy सक्षम)
Posted by कैलाश at 2:07 PM 11 comments Links to this post
Posted by कैलाश at 3:22 PM3comments Links to this post
Posted by कैलाश at 11:53 AM 8 comments Links to this post
Happy Tihar 2066!
May the lamps of joy, spark of colorful flowers illuminate days with the sparkles of happiness, peace & joy. May this festival bring new happiness, new prosperity and new horizons in everybody's life. "HAPPY JOYFUL DIWALI 2066" to everyone. HaveaHappy Time!!!
Happy Diwali 2066.
Posted by कैलाश at 2:04 PM 12 comments Links to this post
दशैमा फुरेको मनको लड्डु...
यहाँहरुको दशै कस्तो बित्यो? मेरो त बडो बिऽऽन्दाऽऽस बित्यो। फूलपातीदेखि पूर्णिमासम्मलाई दिनगन्ती हिसाबले हेर्नेगरी फिल्म बटुले। तर कुरा के पर्यो भने नि! १० वटा फिल्म त ३ दिनमै सकाइयो पो। क्या ताल! ३टा Horror, ३टा War अनि बाँकी चाहि Reality Based story थिए। जे होस् रमाइलो भो फिल्मी दशै मनाउँदा। त्यसबाहेकका दिनमा पकाइतुल्याइ, खानपान र भेटघाटमा बित्यो। यी सबै गर्दागर्दै मेरो मनमा मीठा मीठा लड्डु फुरे। कसरी र के कस्ता भन्ने बारेमै म आज बखान्छु यहाँ।
खास कुरा चाहि के भने नि, योपालीको दशै धेरै समयपछि निकै सुनसान भयो। उपत्यकाबाट अत्याधिक जनमानस आ-आफ्नै पूर्ख्यौली गाउँठाउँ गए दशै मनाउँन। आफू चाहि दशकजति भयो यही खाल्डोमा थरी थरीको, तालतालको दशै मान्दै आइएको छ। तर यो पाली चाहि सडक-पसल-घर धेरै नै सुनसान भएझैँ लाग्यो। खै मलाई मात्रै लाग्या हो कि अरुलाई नि लाग्या हो कुन्नी? फूलपातीको दिन च्याटमा भेटिएका मुलुकबाहिरका धेरैजसो साथीहरुले काठमाडौँ त दशैको अवसरमा विरक्तियो होला भने। काठमाडौँ के के भयो भएन कुन्नी म चाहिँ यथावतै रहे। प्रत्येक साल दशै आएर गएझैँ मैले नि हरेक सालको लामो छुट्टीको उपयोग गरे आफ्नै पाराले। तर यो साल मैले मेरै मनमोजी पारामा दशै मान्ने मौका पाए। नत्र त खै के खै के भन्ने जस्तो खालकै पो हुन्थ्यो। त्यो भनेको चाहि मन नलागी नलागी बाध्यात्मक कामकाज नी गर्नुपर्दाको धङधङी पोखेको नि।
अँ त म भन्दैछु। बाहिर यसो चहार्न निस्कँदा त पूरै सुनसान छ। यसो सागपात अनि खित्त्रिङमित्त्रिङ किन्न निस्कदा नि पसल ठप्पै। दुध खानलाई पसलमा जाँदा नि बन्द। बाटोघाटो नि कसैको प्रतिक्षामा सिर्सिरे हावा खाँदै गरेको पाए। केही छरछिमेकीलाई असाध्यै न्यास्रो र एक्लो लाग्यो। मलाई त किन किन खूब रोमाञ्चक लाग्यो। लाखौँको भीडमा एक्लो हुनु र न्यास्रिनुको पीडाभन्दा त एक्लो भएर पनि भीडको अभाव नहुनु निकै जाती लाग्यो यो ज्यानलाई। खै यो मन न हो कहिले के रुचाउँछ। कहिले के। यो पालीको दशैमा त्यही रुची भयो।
शुन्य सडकको सिर्सिरे हावा रोमाञ्चक लाग्यो। दुबै हात फैलाएर केही बेर बीच सडकमा मस्त उभिए। कुटीमा एक्लो भएर मनमोजी पारामा रमाए। अरु बेलाको तुलनामा एकदमै सुनसान भएको वातावरणसँग साउती मार्दै फुस्‌फुसाए। अरुबेला भीडसँग जुध्थे। लड्थे। झट्कारिन्थे। फट्कारिन्थे। यो दशैमा सुनसान र शान्त वातावरणसँग खूबै बात मारे। ती बातहरु मिठा लागे। रसिला लागे। भरिला लागे। एकान्तमा पहिलोपल्ट कुनै नव दम्पतिको प्रेमले पूरापूर उघ्रिने मौका पाएसरह। भन्छन् नि क्या त, त्यो 'वातावरण मैत्री' हो कि त्यस्तै त्यस्तै केही भनेर। हो त्यस्तै त्यस्तै पो भएझैँ अनुभूत गरे मैले त। यसरी एउटा लड्डु फुराए। त्यसै त्यसै आफै मख्ख परे। यस्तो लाग्यो कि त्यो शुन्यता र शान्तपनको भोगी सिर्फ म एक्लो भए। अरु जो थिए तीमध्ये अधिक त्यही भीडभाड, कोलाहाल, हल्लाखल्ला र जमघटको भोकमा पिल्सिए होलान्।
हामी बस्ने गरेको घरमा बस्ने जम्मा दुईजना थियौँ। म सबैभन्दा माथिको छटमा। अर्को साथी सबैभन्दा तलको तलामा। एकदिन मेरो कुटीमा बसेर थुप्रै प्रसंगमा गफियौँ। कुरैकुरामा मैले मनमा फुरेको लड्डुलाई यसो बाहिर छर्दै भने-
"आहा! अहिलेकै जति मान्छे, गाडी, शान्तपन सँधै रहने हो भने यो काठमाडौ पनि क्या हुने थियो हगि?"।
साथीले तुरुन्तै भन्यो- "यहाँका घरबेटी अनि पसलेहरु सुकीहाल्छन् नि अनि"।
"सुक्ने फुक्ने त हुन्छ नै। तर सोच्नुस् एकपल्ट तपाईहामी जस्तो बहालवालाहरुको क्या भाउ होला"।
अब म निकै लामै बोल्छु लगातार........।
"ल सोच्नुस् यस्तै भयो स्थिति। यतिका विधि घर बनिसकेका छन्। पसल खुलीसकेका छन्। जो फर्कन्छन् ती फर्कन्छन्। बाँकी फर्कन अनुकूल नपरेकाहरुको लागि मोज हुन्छ। घरबेटी आफ्नो घरको बहालमा राख्ने मान्छेको खोजीमा हुन्छ। घरबेटीहरुबीचमा बहालवालाहरुलाई दिने सुविधाको होड चल्छ। दिनहुँ प्रयोग हुने सरसामानहरु लाग्दोपुग्दो हुन्छन्। कृत्रिम मूल्यबृद्धि/अभाव पैदा हुदैन। साँघुरो सडकमा हिड्दा नि होलोखोकुलो लाग्छ। सडकमा जाम कम हुन्छ। सवारी साधन सीमित तर यात्रुको लागि पुग्दो हुन्छ। इन्धनको अभाव नि हुन्न। पानी नि भनेजति भनेको बेलामा खान/पिउन, चलाउन पाइन्छ। फोहोर नि टुङ्गो लगाउन सजिलो। प्रदुषण हट्छ। जाडोमा घाम खान पाइने। गर्मीमा हावा खान पाइने। भनेको बेला भनेको ठाउँमा पुग्न पाइने। शहर सफा। हावापानी चङ्गा। अनि यहाँका मान्छे दङ्ग। आहाऽऽऽऽ नि!"
मेलै फलाक्न नसक्दै साथीले "के हो आहा नि! उता हेर्नुस् त" भन्यो। कान्तिपुर टेलिभिजनले दशै नसक्दै हूलका हूल मानिस उपत्यका छिर्दै भन्दै बसको छतमाथि समेत ठेलमठेल मान्छे कोचिएर पोको पन्तुरो भिरेर बसेको श्रब्यदृश्यसहितको समाचार प्रसारण गर्न थाल्यो। स्वादले र्याल झार्न नि नपाउँदै मनमा फुरेको लड्डु निमेषमै बिलायो। भर्खरै साङ्गोपाङ्गो थियो भर्खरै नाम निशानै छैन जसरी। अनि त २०६१ मा प्रकाशित तीर्थराज वन्तको हाइकु सङ्ग्रहको एउटा हाइकुको लाइन हुबहू ओठले फुक्यो-
मान्छे असाध्य सस्तो
बाँकी अन्य ब्लगर मित्रहरुबाट है...
Posted by कैलाश at 6:03 PM6comments Links to this post
२०६६ सालको दशैँको मंगलमय शुभकामना
२०६६ सालको विजयादशमीको उपलक्ष्यमा कुटीका सम्पूर्ण सारथी, आगन्तुक तथा ब्लगर मित्रहरुलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आफू र आफ्नो वरपरका अनेकौ दुःख-कष्ट, रोगव्याधी, लन्ठाहरुसँग लड्न सक्ने क्षमता दुर्गामाताले प्रदान गरुन् भन्ने प्रार्थना छ। महंगी, प्रदुषण, तनाव, बेरोजगार, रोग-शोक-भोकले किचिएर लघु मानव भइसकेका हामीमा यी सब कुरासँग जुध्ने सक्षमता अझ पलाओस्।
जय होस् सबैको! मंगल होस् सबैको!
शुभ दिन, शुभ रात, शुभ समय!
Posted by कैलाश at 5:32 PM6comments Links to this post